Colaadii Shabeelaha hoose oo la xaliyey iyo Dowladda federaalka ah oo ku baaqday gobol nabadeed – Radio Daljir
Colaadii Shabeelaha hoose oo la xaliyey iyo Dowladda federaalka ah oo ku baaqday gobol nabadeed
Luulyo 27, 2013 3:33 b 0
Afgooye, July 27, 2013 – Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ku guulaystay qorshe nabad lagu dhex dhigayey beelo Soomaaliyeed oo ku dagaalamay gobolka shabeelaha Hoose, gaar ahaan deeganada ku dhow magaalada Marka,
Dagaalka oo ahaa mid socday labbadi maalmood ee ina dhaafay ayaa dhaliyey khasaare badan, waxase dhex galay dagaalka waxgaradka iyo siyaasiinta beelaha dagaalamay ee degan Marka iyo Ceel-madoobe iyo masuuliyiin ka tirsan Dowladda.
Gudoomiyaha Dowladda federaalka ah u qaabilsan gobolkaasi shabeelaha Hoose Cabdulqaadir Siidi oo la hadlay war-baahinta dowladda, wuxuu sheegay in la meel mariyey heshiis horudhac ah oo lagu qaboojinayo xiisada ka aloosnayd gobolka.
Mudane Siidi oo arintaasi ka hadlay ayaa yiri ??Maamulka gobolka iyo odayaasha labada dhinac waxaan ku guuleysanay in la joojiyo xabadda oo la kala dhex dhigay ciidamadii beelaha,? dowladda dhexeana wey soo fara-gelisay waxaana ka codsannay in gudaha gobolka? la dhigo Gogol nabadeed,??
Kadib dagaalka oo sii cuslaaday dhamaadkii toddobaadkii hore, ayaa habeen hore waxaa shir balaaran ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka, waxaana shirkaasi goob joog ka ahaa masuuliyiin uu horboodayey wasiirka arimaha gudaha iyo xilibaano ka soo jeeda gobolka, kadibna waxaa loo howl-galay in la xaliyo xiisada ka jirta Marka.